News 18 Nepal || ‘भुटानले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा यसरी पायो सफलता’
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेको समयमा डा. रवीन्द्र पाण्डेले कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रण र यसबाट बच्ने बिभिन्न उपायहरुको बारेमा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिइरहेका छन् । यस्तै आज पनि डा. पाण्डेले भुटानले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न के कारणले सफल भयो भन्ने बारे जानकारी दिएका छन् ।
जब चीनको वुहानमा कोरोना संक्रमण फैलियो, भुटानले त्यो समयदेखि नै सतर्कता अपनाउन सुरु गर्यो । भुटान आउने सबै व्यक्तिलाई बिमानस्थलदेखि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर २१ दिनसम्म स्तरीय क्वारेन्टाइनमा निशुल्क राख्यो । उनीहरुलाई कम्तिमा ३ पटकको परिक्षणमा कोरोना संक्रमण नेगेटिभ देखिएपछि होम वा होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने तथा सरकारले निरन्तर अनुगमन र निगरानीमा राख्ने काम गर्यो ।
हरेक संक्रमितको केहि घण्टाभित्र नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग गरेर क्वारेन्टिनमा राख्ने तथा पटकपटक परिक्षण गर्ने गर्यो । भुटानले भबिष्यमा कुनै महामारी आए के गर्ने भनेर चीनमा गत बर्ष महामारी नियन्त्रण अभ्यासको तालिम लिएको थियो । चीनले सन् २००२- २००३ मा सार्स नियन्त्रण गरेको अनुभव सिकेर पारो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रिल अर्थात नक्कली महामारी अभ्यास गरेको थियो । यस्ता अभ्यासले आपतकालीन तयारीलाई मार्ग निर्देश गर्छन् ।
भुटानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै नागरिकको स्वास्थ रेखदेख तथा उपचार गर्ने जिम्मा लिएको छ । भुटानमा स्वास्थ्य सेवा सबै निशुल्क छ। कुनै पनि डाक्टर वा अस्पतालले नागरिकबाट शुल्क लिन पाउदैनन् । देशको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति तथा संबिधानमा स्पष्ट भनिएको छ – राज्यले आधुनिक र परम्परागत औषधि दुबैमा आधारभूत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क पहुँच प्रदान गर्नेछ । भुटानले स्वास्थ्य सेवाको समान वितरणमा ध्यान दिएको छ ।
महामारीको समयमा राष्ट्रिय एकताको दृढ भावना समाजका सबै वर्गले प्रदर्शन गरिरहेछन् । फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने वर्गलाई स्वयंसेवीहरुले गुणस्तरीय खानपिनको ब्यबस्था गरेका छन् । हरेक ब्यबसायीले महामारी नियन्त्रणको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट सरकार तथा नागरिकलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
मास्क, दुरी तथा सरसफाईलाई सबै जनताले जीवनशैली बनाएका छन् । भुटानले देशका ५४ ठाउँमा ‘ फ्लु क्लिनिक ‘ संचालन गरियो । ज्वरो तथा रुघाखोकी लागेका हरेक व्यक्तिको पिसिआर तथा छातीको एक्स रे गर्ने काम गरियो। परिक्षणबिना सहर र गाउँमा आवतजावत बन्द गरियो ।
हङकङकाे एक अपार्टमेन्टमा आगलागी, ज्यान गुमाउनेमा धेरै नेपाली